Dhuusamareeb: Khasaare ka dhashay israsaaseyn ka dhacday 21aad iyo qorshe ka fashilmay Qoor-Qoor – Hornafrik Media Network
Dhuusamareeb: Khasaare ka dhashay israsaaseyn ka dhacday 21aad iyo qorshe ka fashilmay Qoor-Qoor
Waxaa maanta magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug isku rasaaseeyey ciidanka militeriga Soomaaliya qeybta 21-aad iyo kuwa Nabad sugidda ee ku sugan Dhuusamareeb.
Israsaaseyntaas ayaa bilaabatay ka gadaal markii la isku deyey in ciidanka militeriga ee qeybta 21aad laga raro xaruntooda, iyadoo uu qorshuhu ahaa in maanta halkaas uu madaxtooyada Galmudug ka dhagax dhigo madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoor-Qoor.
Israsaaseyntaas waxaa la sheegay in ay ku geeriyootay laba askari oo dhinacyada dagaalamay ah, waxaana hadda degan xaaladda xaruntii lagu dagaalamay oo ay ku suganyihiin ciidankii horay u joogay ee qeybta 21aad.
Sidoo kale waxay israsaaseyntaasi baajisay qorshe uu maanta Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor uu ku dhagax dhigi lahaa xarunta cusub ee Madaxtooyadda Galmudug oo la doonayo in laga dhiso xarunta qadiimiga ah ee 21-aad, halkaas oo haatan fariisin u ah ciidanka xoogga dalka ee ka howlgala bartamaha Soomaaliya.
Turkiga iyo Midowga Yurub oo ku dhow in ay gaaraan heshiis cusub